Fangatahana Mica ao amin'ny orinasa indostrialy sy ny plastika | Lingshou
(1) Ny fanovana ny fiasa Optical Plastika
Ny sombin-tsolika mika dia afaka taratry ny taratra tsy miankina ary koa ny manintona ary miaro UV, sns. Raha mampiditra mozika mando avo lenta amin'ny sarimihetsika fambolena dia ho sarotra ny hazavana rehefa mivoaka rehefa miditra ao, ka miaro ny hafanana any anaty trano ary ny sarimihetsika plastika saha, sns ... Ato amin'ity fampiharana ity, tena zava-dehibe ny fahadiovana sy ny firoboroboana ny mica powder. Amin'ny lafiny iray, ny fihenan'ny loto dia hampihena ny mika ny fiantraikany fampivoarana, misy fiantraikany amin'ny fangaraharana, hampitombo ny haavon'ny zavona ary koa ny fihenan'ny fidirana amin'ny maivana ao anaty trano-be. Amin'ny lafiny iray, raha tsy tsara ny mika amin'ny rafitry ny flaky, dia maharatsy ihany koa ny fiantraikan'ny fanakanana ny taratra infrainiera. Gansu Gelan Chemical Technology Co, Ltd, avy ao amin'ny vondrona Hong Kong Lee dia nampiasa mika tany mando hanamboarana sarimihetsika fambolena, fa tsy hampihena ny fangaraharana azy fotsiny amin'ny 2%.
Ny zava-mahadomelina, kosmetika, sakafo sy vokatra hafamila miaro ny taratra, indrindra ny taratra ultraviolet, hanatsarana ny fitehirizana azy ireo. Mba hanaovana izany, azontsika atao ny manampy ny vovoka mika mando miendrika volon-doha vita amin'ny volon-tany vita tsara ao anaty fonosana plastika. Ny famenoana mica lehibe dia afaka manatsara ny molotra fitaovana (ny vokatry ny pearlescent), ary ny vovoka mica tsara dia afaka manaisotra ny kofehy.
(2) Fanatsarana ny fahatokisan'ny rivotra amin'ny plastika
Ny vovony mica dia mando dia manana endrika boribory manify tsara, miaraka amin'ny hatevin'ny nanomène sy ny savaivony ny halavany hatramin'ny 80 ~ 120, ka dia manana faritra fanakanana tena mahomby. Ny haingam-pandriana amin'ny plastika dia hampitombo tokoa rehefa avy nampidirina vovoka mica mando avo be sy avo kokoa. Ny plastika toy izany, araka ny literatiora patent, dia azo ampiasaina amin'ny fanamboarana Tavoahangy sigara, tavoahangy labiera, tavoahangy fanafody, fitaovana famonosana ranoka hamandoana ary koa ireo fitaovana manokana vita amin'ny fonosana plastika.
(3) Fanatsarana ny fiasa ara-batana sy mekanika amin'ny plastika
Ireo mpangaro feno flaky sy fibrous dia afaka manapa-kevitra ny adin-tsaina, izay mitovy amin'ny fanamafisana ny kodiarana amin'ny simenitra simenitra sy ny fitaovana anisotropika amin'ny akora fampitomboana maro (plastika, fingotra, resin, sns). Ny fampiharana indrindra aminy dia ao amin'ny fibre karbonika, fa ny fibre karbonika dia lafo be ary voafetra amin'ny hazavana, noho izany, sarotra ny mampihatra azy.
Asbestos dia voafetra amin'ny fampiharana an'izay afaka miteraka kansera. Ny fibre fitaratra goavam-be (ohatra, ny halavan'ny 1 micron na amin'ny haavon'ny nanometrika) dia miatrika zava-tsarotra maro amin'ny famokarana ary avo kokoa koa ny vidiny. Ny mpanefy be dia be, anisan'izany ny vovo-jaza quartz sy ny vovobony kaolin izay be tany amin'ny tany maina mica dia tsy manana izany fiasa izany toy ny fasika sy vato ao amin'ny simenitra simenitra.Rehefa manampy vovo-mofomamy fotsiny dia toy ny vovoka micaizany dia avo amin'ny savaivony-savaivony, ny tanjaky ny tensile, ny fiatraikany mahery, ny modulus elastika, ny fananana mekanika hafa, famolavolana endrika (toa ny hafanana ny fihenan'ny hafanana sy ny fihenan-tsatra amin'ny fihenan-tsasatra), ary hihatsara ny fampisehoana anti-wear.Ny fandalinana betsaka momba an'io dia notanterahina tamin'ny Science Science. Ny iray lehibe dia ny haben'ny famenoana.
Ny plastika (ohatra, résin) dia voafetra amin'ny fanajana ny tenany ihany. Maro ny karazan'ny famenoana (ohatra, talc powder) dia ambany kely fotsiny amin'ny herin'ny mekanika. Mifanohitra amin'izany, ny iray amin'ny singa amin'ny granita, mika dia tena mamaivay amin'ny herin'ny matihanina sy ny hery mekanika. Noho izany, amin'ny fampidirana ny vovoka mika ho famenon'ny plastika dia ho betsaka ny fiantraikany fampivoarana. Ny mari-pahaizana avo lenta amin'ny halavam-pandrefesana dia fanalahidy ho an'ny fampivoarana ny vovobony mika-fahadiovana avo.
Ny fikarakarana ny vovoka mika dia manana andraikitra lehibe eto amin'ny fampiharana eo ambony ho azy fa afaka manatsara be ny fahatsaran'ny simika ireo fitaovana, ka manatsara ny fampitaovana ny fitaovana. Ny fitsaboana fifangaroana marina dia lakile ho an'ny fampivoarana fananana mica vovoka, toy izany koa ny fanovana ny dingan'ny crystallization resin. Ny fampiasana vovony mika manitra avo dia mety hahatonga ny vokatra ho tsy misy dikany kokoa. Ity karazana teknolojia ity dia ampiharina betsaka amin'ny indostrian'ny plastika, toy ny famokarana vokatra avo lenta, anisan'izany ny singa plastika sy ny fitaovam-pitaterana, fitaovana vita amin'ny tany, hoditra ivelany ivelan'ny fitaovana ao an-tokantrano, fitaovana famonosana, fampiasana isan'andro, sns.
(4) Fanatsarana ny fananana miady amin'ny vokatra vita amin'ny plastika
Mika manana fanoherana herinaratra avo lenta ny Mica, noho izany dia fitaovana avoakan-jaza avo lenta izy io. Ny fampiasana mika hanatsarana ny fananan'ny insulation ny fitaovana dia teknolojia efa fanta-daza. Ho an'ny fanamboarana vokatra plastika insulasi avo dia azo ampiana ny mika feno rano mando. Araka ny voalaza etsy ambony, ny mika avo amin'ny fika vy dia tokony hialana amin'ny fijanonan'ny insulasi ambany. Ny mika maina dia tsy mbola voasasa amin'ny laiko ary avo ny votoaty vy, ka tsy mety amin'ny fampiasana azy.
Mihoatra noho izay ny fampiharana ny mica tany mando amin'ny plastika. Ampiasao tanteraka ny fananana tsy manam-paharoa amin'ny vovoka mica wet base, maro ny vokatra plastika vaovao sy ny teknolojia fampiharana no mivoatra. Ohatra, amin'ny fampidirana ny vovoka mika amin'ny plastika, ny fanamboarana ny fanaovana fampisehoana ary ny fatorana fifamatorana miompana. amin'ny alàlan'ny fametrahana ny SnO2 eny ambonin'ny tany na amin'ny fametahana vy, ny vovoka mika dia mety ho azo atao ary azo ampiasaina amin'ny famoahana vokatra anti-statique sy plastika plastika; amin'ny alàlan'ny coated miaraka amin'ny TiO2, mika dia pigmentcent pigment ary azo ampiasaina amin'ny fampiharana maro; amin'ny fandokoana, mika dia pigments tena tsara; Ny mika dia afaka manatsara ny fanatanterahana ny lubrication koa ny vokatra.